Maty Tany Am-ponja Ilay Lehilahy Niharan’ny Sazy Noho Ny Fanoherana Mpanjaka Tao Thailand · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2012 6:21 GMT
Akong dia voaheloka hifonja 20 taona noho ny raharaha fanivaivàna mpanjaka izay tsy voaporofo akory natao azy, mifanaraka amin'ny lalàna momba ny Heloka Bevava Atao Amin'ny Alàlan'ny Solosaina any Thailand. Ilay rangahibe efa 60 taona, izay niady ela tamin'ny homamiadana amin'ny vava, dia heverina fa maty vokatr'io aretiny io. Ireo ezaka natao hanafahana azy amin'ny alàlan'ny onitra, noho io aretiny io indrindra, dia nolavina hatrany avokoa. Ny fanentanan'ireo mafàna fo sy avara-pianarana ao Thailand, ary avy any ivelany mba hamotsorana an'i Ampon, raha toa kosa nitambatra ireo fanohanana avy amin'ny vahoaka, dia samy tsy nampiova ny nahazo azy. Ity tranga ity no noraisina ho iray amin'ireo henjana indrindra amin'ny “fanamelohana noho ny faniratsiràna mpanjaka voarakitra hatrizay”.
Nanambara mazava tsara ny didy ilay mpitsara, Chanatip Mueanpawong ” Tsy afaka niantso vavolombelona akory hatramin'ny farany ny mpiampanga mba hanamafy fa hoe ity olona miaro tena ity no hany tokana nandefa hafatra tany amin'ny findain'ny mpitory. Tena sarotra ny nandroso porofo mandresy lahatra satria ny voatory, ho nanao izany fihetsika izany, mazava loatra fa hamafa ny nataony mba tsy hahitan'ny hafa azy ireny. Amin'ny toy izany dia ilaina ny mifototra aminà porofo alaina ara-keviny mba ho enti-manondro ny eritreritra nanosika ilay toriana.
Araka ny iLaw, ny polisy dia niainga tamin'ny tahiry momba ny fidirana hampiasa ilay finday tamin'ny alalan'ireo vavolombelon'ny sampan-draharaha mpanome tolotra fiseraserana sy ny polisy mba hanamelohana an'i Akong.
Piangkam Pradabkwan dia nanoratra tononkalo iray tao amin'ny pejiny Facebook, izay ny tonony farany dia manao hoe : “Maty i Akong. Iza no namono ilay lahy antitra? Ela loatra ny fiavian'ny rariny – heloka bevava izao. Tsy misy vidiny ny ain'olombelona ary mitobaka be. Mifoka sy ahenoana fofom-paty isan'andro ry zareo.”
Ny hafa tsy dia taitra loatra tamin'izay fahafatesan'i Akong. “Miangavy mba omeo haja ilay lahy antitra. Mety efa any amin'ny helo izy izao miaraka amin'ny afobe mipololotra eo am-bavany,” hoy i major181226 namaly ilay lahatsary Youtube momba an'i Akong. “Mendrika azy ny ho faty. Hisondrotra amin'izay izao ity tanintsika ity. Rehefa tapitra ilay sedra maroloko, afaka hivoatra amin'izay ny firenantsika. Sa tsy miombona amin'izany ianao??” hoy i Purno5